ဖုန်းတွေပေါ်က Reading Mode တွေက လူ့ကျန်းမာရေးကို တကယ်ရောအကျိုးပြုရဲ့လား? - PX
ဖုန်းကထုတ်လွှတ်တဲ့ အပြာရောင်အလင်းဟာ လူ့မျက်လုံးကိုထိခိုက်တတ်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့် Smartphone Company တွေက ညဘက်ဖုန်းသုံးသူတွေအဆင်ပြေအောင် Blue Light ကို စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ Reading Mode feature ကို ထည့်သွင်းပေးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Feature က လူတွေကို တကယ်ရောအကျိုးပြုရဲ့လား? နိုင်ငံခြား Tech Media တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android Authority ရဲ့ ဒီထောက်ပြချက်ကိုဖတ်ပြီးရင်တော့ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းသုံးတဲ့အကျင့်ကို ပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
University of Manchester က လတ်တလောလေ့လာချက်စစ်တမ်းတစ်ခုအရ Reading Mode ဟာ လူတွေရဲ့ အိပ်ချိန်သတ်မှတ်ချက် (Circadian Rhythm) ကို ကမောက်ကမဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိထားပါတယ်။ အလွယ်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့ခင်းနေ့လယ် နိုးကြားနေချိန်မှာ နေရောင်လို အဝါရောင်သမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းကို အများဆုံးမြင်တွေ့ရပြီး အပြာဘက်သမ်းတဲ့အလင်း (ဥပမာ လျှပ်စစ်မီးရောင်) တွေကို ညဘက်မှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ မွေးကတည်းက ဒီ Rhythm နဲ့ကျင့်သားရနေတဲ့လူ့ဦးနှောက်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်လုံးနဲ့အဓိကတွေ့မြင်ရတဲ့ အလင်းရဲ့အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး လူတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်၊ နိုးကြားချိန်တဲ့ အိပ်စက်အနားယူချိန်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့။
Dr. Tim Brown ဦးဆောင်တဲ့ ဒီစမ်းသပ်လေ့လာမှုအရ အစမ်းသပ်ခံကြွက်တွေမှာ အပြာရောင်အလင်းဟာ အဝါရောင်အလင်းလောက် သူတို့ရဲ့အိပ်စက်ချိန်ကို ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့တာကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီစမ်းသပ်ချက်အရ ညဘက်ဖုန်းသုံးပြီးအိပ်မရဖြစ်ရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းဟာ အလင်းရဲ့ Color Temperature ထက် Brightness Level က လူ့မျက်လုံးပေါ် သက်ရောက်မှုအားပိုကြီးတယ်ဆိုတာ ကောက်ချက်ချလို့ရနေပါတယ်။
နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပြရရင် လေယာဉ်တွေပေါ် အချိန်ကြာကြာ လိုက်ပါစီးနင်းရတဲ့ ခရီးရှည်မျိုးမှာ ညဘက်လူတွေအိပ်ပျော်ချိန်မှာ အပြာဘက်သမ်းတဲ့ အလင်းခပ်မှိန်မှိန်ကို ဖွင့်ပေးထားတာဟာ လူတွေနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့ သက်သေတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းသုံးပြီးအိပ်မပျော်ဖြစ်တတ်တာတို့၊ မျက်စိထိခိုက်မှာတို့ကို ရေရှည်အတွက်စိုးရိမ်ရင် Reading Mode ဖွင့်တာ၊ မဖွင့်တာထက် အိပ်ခါနီးအချိန်၊ အိပ်ရာပေါ်မှာ ဖုန်းအသုံးပြုတာမျိုး၊ အခန်းထဲမီးပိတ်ထားပြီးမှ ဖုန်းကို ဆက်သုံးနေတာမျိုး၊ နောက်ပြီး ညဘက်မှာ Brightness ကို အရမ်းတင်ပြီး ဖုန်းသုံးတာမျိုး စတဲ့အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကို ရှောင်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဖို့ အကြံပေးပါရစေ။